အမေရိကန် အနောက် အလယ်ပိုင်းဒေသ ဆောင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်၊ နှစ်ဦးသေဆုံး - Yangon Media Group
အမေရိကန် အနောက် အလယ်ပိုင်းဒေသ ဆောင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်၊ နှစ်ဦးသေဆုံး
ဒေါ်ရီယန်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း အမေရိကန်ကိုဦးတည်၊ မုန်တိုင်းကြောင့် ကာရေဘီယံမြောက်ပိုင်းတွင်ပျက်စီး
ပြောင်းရွှေ့မည့် မြို့တော်သစ်အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရ တည်ဆောက်နေ
ဟောင်ကောင်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက်ပြုလုပ်၊ ဩစတြေးလျတွင်အလုပ်လုပ်နေသူ အလုပ်မှထွက်ကာ ဆန္ဒပြပွဲသို့လာရောက်ပူးပေါင်း
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ အက္ကဘာစီးပွားရေးဇုန်တွင် အသုံးမပြုတော့သည့် ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကို ပင်လယ်ထဲတွင် နှစ်မြှုပ်ကာ ရေသတ္တဝါများနေထိုင်ရန် လုပ်ဆောင်
ချီကာဂို၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ဝ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အ နောက်အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် ဆောင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရာ လူနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားလိုက်သည်။ မုန်တိုင်းကြောင့် စာသင်ကျောင်းများ ပိတ်ထားခဲ့ရပြီး လေယာဉ်ခရီးစဉ် ရာပေါင်းများစွာကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ရကြောင်း အေပီသတင်းက ဖေဖော်ဝါရီ ၁ဝ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
နှင်းများဖုံးလွှမ်းနေမှုကြောင့် မစ်ချီဂန်တောင်ပိုင်း အဝေးပြေး လမ်းများတွင် ပျက်စီးမှုများပြားခဲ့ ကြောင်း၊ အမှတ် (၂၃) လမ်းပေါ်တွင် ကားတစ်စီးတိုက်မှုဖြစ်ကာ လူတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုသည်။ ပစ်ကပ်ထရပ်ကားတစ်စီးမှာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ရဲများကိုဝင် တိုက်ခဲ့ရာ ဆေးရုံသို့ပို့ခဲ့ရသည်။ အီလီနွိုက်စ်တွင် အသက်(၆ဝ) ရှိသူတစ်ဦးမှာ နှင်းမုန်တိုင်းကြောင့် နှလုံးရောဂါဖောက်ကာ သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုသည်။ ချီကာဂိုမြို့တော်ဝန်က ယခုအခါ တတိယမြောက်နှင်းကျခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုတစ်ပတ်လုံးဆက်တိုက်ကျနေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
ချီကာဂို၏ အိုဟဲယားနိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွင် လေယာဉ်ခရီးစဉ် ၁ဝဝဝ ကို ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ရကြောင်း၊ မစ်ဒ်ဝေး၌ ခရီးစဉ် ၃ဝဝ ကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ရကြောင်း ချီကာဂိုလေကြောင်း ပျံသန်းရေးဌနာက ပြောကြားလိုက်သည်။ ဒက်ထရွိုက်တွင် နှင်းထုမှာ လေးပေအထိထူထပ်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ဒက်ထရွိုက်နှင့် မဲလာဝါကီတွင် ကျောင်းများပိတ်ထားခဲ့ရာ ကလေးများနှင်းထဲတွင် ဆော့ကစားနေကြသည်ဟုဆိုသည်။ နီဘရာဆကာနှင့် အိုင်အိုဝါးတို့တွင်လည်း ကျောင်း များပိတ်ထားခဲ့ရကြောင်း၊ အချို့ ကျောင်းများတွင် စာသင်ချိန်နောက် ကျမှစခဲ့ရကြောင်းသက်ဆိုင်ရာက ပြောခဲ့သည်။
အင်ဒီယာနားနှင့် ချီကာဂိုတို့တွင် အဝေးပြေးလမ်းများကို ရှင်း လင်းရေးလုပ်ကြရသည်ဟုဆိုသည်။ ချီကာဂိုလမ်းများဌာနာ မဟာမင်းကြီးက တစ်ပတ်လုံးလမ်းများ ကို ဆားများဖြင့်ပက်ဖျန်းကာ ဆီးနှင်းများပျော်ဆင်းအောင် လုပ်ခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။ လမ်းများတွင် နှင်းထု ၁ဝ လက် မ(၂၅ စင်တီမီတာ)နှင့် ချီကာဂို တွင် ၁၁ လက်မ(၂၈ စင်တီမီတာ) အထိကျခဲ့ကြောင်း ရာသီဥတုခန့် မှန်းရေးဌာနက ပြောခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှား ရေတပ်က ဘက်ကမ် ကမ်းလွန်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါး တစ်တန် ဖမ်းဆီးရမိ
သမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး အစိုးရနှင့် တွေ့ခွင့်ပြုရန် တင်ပြထားခဲ့သော်လည်း အကြော??
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဒေသတွင် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွား၊ ၁၅ ဥင်္ီးသေဆုံး
ရာသီစာ ပဲမြစ် အထွက်လျော့နည်း သဖြင့် မန်ကျီးတော ပဲမြစ်စိုက်တောင်သူများ ဈေးကောင်းရ
မန်ယူသို့ ပြောင်းခွင့် မပေးခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မက်ဂွိုင်းယား လေးစားမှုရှိ
ဓာတု လက်နက်များ အသုံးပြု တိုက်ခိုက်နေ၍ ဆီးရီးယားသည် တန်ဖိုးကြီးမားစွာ ပေးဆပ်ရလိမ့်မည်ဟု သ??
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီး ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲကြီး၏ သမိုင်းမှတ်တမ်းအဖြစ် ဓာတ်ပုံပြ?
အမေရိကန်က ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် အာကာသတပ်ဖွဲ့ထူထောင်မည်